PressReader - Ilanga: 2018-07-09 - INJABULO BEBOLEKWA UMDLALI
INJABULO BEBOLEKWA UMDLALI
Ilanga - 2018-07-09 - Ezemidlalo - MFANAFUTHI NDLOVU
BAQINISE isikwati ngomdlali wamaZulu FC abaphathi boThongathi FC olugijima kwiNational First Division (NFD).
ILANGA lithole ukuthi uThongathi lubolekwe wuSuthu uSibongiseni “Fanifani” Mthembu ogijima esiswini.
Ezinye izindaba ezinhle kuThongathi kube ngezokuvuselela inkontileka kukaDiyo Sibisi. UDiyo ujoyine le kilabhu esuka kuThukela FC olu-gijima kwiSouth African Football Association (Safa) KwaZulu-Natal ABC Motsepe League. USibisi usayine inkontileka yeminyaka emibili.
UJackson Mojapelo oyisikhulu esiphezulu kuThongathi FC, utshele ILANGA ukuthi bajabule kakhulu ngokuvuselela kwalo mdlali. Uthe bakholwa wukuthi isipiliyoni sakhe sizobasiza kakhulu. Nokho uthi usalinde uhlu lwabadlali abafunekayo kuJohnny Ferreira ongumqeqeshi.
“Sibe nenhlanhla enkulu sibolekwa wuSuthu uFan-Fan Mthembu. Ngikholwa wukuthi uzokwazi ukusisiza esiswini.
"UMthembu ungumdlali omuhle kakhulu. Sikholwa wukuthi uMthembu uzoshesha ukungena egiyeni. Ngicabanga ukuthi indaba kaSbu Magaqa noXolani Silawula ebesibabolekwe wuSuthu ngeke sibathole kulena. Nokho ngeke sililahle ithemba sizolinda ukuzwa ngabaphathi boSuthu,” kusho uMojapelo.
Le kilabhu isanda kuvuselela nenkontileka kaPhilani “Maoti” Shange ofike kuyona evela kwiGreenwood Park Friends (GWP) ngesizini edlule. UQedi Dlamini oyimenenja yoSuthu, uvumile ukuthi uMthembu bamubolekise kuThongathi FC kuze kuphele isizini.
ULUKHANYO Amm weSharks edlubulundela kuPieter-Steph du Toit weStormers emdlalweni weSuper Rugby ngempelasonto eKapa.